टिममा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? एक जना समझदार व्यक्ति छ भने यस्तो हुन्छ असर | Rajmarga
टिममा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? एक जना समझदार व्यक्ति छ भने यस्तो हुन्छ असर
टिममा काम गर्ने अधिकांश मानिस आपसमा सहयोग आदानप्रदान गर्दछन् । एकअर्कालाई सहयोग गर्दछन् । यसबाट टिमको माहौल पनि राम्रो हुन्छ र काम पनि राम्रो हुन्छ ।
आखिर टिमभित्र सहयोगको कारण के हुन्छ ? के कारणले मानिसहरु एकअर्कालाई सहयोग गर्दछन् ? त्यो कुन चाहिँ खुबी हुन्छ, जसका कारण मानिसहरु आफ्ना लागि पनि उत्तम सावित हुन्छन् र टिमका लागि पनि ।
यो प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि केही नयाँ अध्ययनहरु भएका छन् । नतिजाले भन्छ कि सुझबुझ त्यो कारण हो जुन आपसी सहयोगलाई बढाउने गर्दछ । टिमको भलो गर्दछ ।
यसअघि भएका केही अनुभवले भन्दथ्यो कि मानिसमा रहेको सहयोगको भावना र सामाजिकताका कारणबाट मानिसहरु यसो गर्दछन् ।मानिस एकअर्कालाई सहानुभूति राख्छन्, सहयोग गर्दछन्।
तर, अब नयाँ अध्ययनले भन्छ कि स्मार्ट मानिस अक्सर टिमलाई उत्तम काम र सहयोगका लागि प्रेरित गर्दछन् । सुझबुझपूर्ण मानिस आफ्नो व्यवहारको नतिजा र नाफा–नोक्सानको अन्दाजा लगाउन सक्षम हुन्छन्। यस आधारमा उनीहरु सहयोगको भावनालाई बढावा दिने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो बुद्धिमानीबाट काम निकै सजिलैसँग गराउँछन्।
हालै बेलायत र अमेरिकामा एउटा अभ्यास गरियो । यसमा ७९२ जना सहभागी भए । यो अध्ययनमा मानिसको व्यवहारबाट यो कुरा खोजी गर्नु थियो कि उन आपसमा सहयोग किन गर्दछन् ।
यी सहभागीहरुलाई एउटा प्रिजनर्स गेम खेल्न भनियो । यो खेल ठिक त्यस्तै छ जस्तो एउटा अपराधको सिलसिलामा दुई जना पक्राउ परेका छन् । फेरि दुवैसँग अलगअलग सोधपुछ गरिन्छ । यदि यसमध्ये एकजनाले अपराधको कच्चा चिट्ठा खेले यसलाई माफी हुनेछ, र अर्कोलाई लामो सजाय ।
यही यदि दुवै आरोपीले मुख बन्द राखे भने सजाय दुवैलाई हुनेछ । तर कम हुनेछ । साथीको पर्दाफाश गर्नेलाई त छोडिनेछ तर उसको साथीलाई तीन वर्षको कैद हुनेछ । यही यदि दुवैले मुख बन्द राखे भने दुवैलाई एकएक वर्षको सजाय हुनेछ।
अध्ययनमा सहभागीहरुले कैद सजायको साटो आपसी सहयोगमा इनाममा पैसा पाउने थिए । अर्थात उनीहरु यदि आफूखुसी खेले तब एउटालाई जोडदार फाइदा र अर्कोलाई बढी नोक्सान हुन्थ्यो । यही आपसी सहयोगबाट खेले दुवैलाई फाइदा हुन्थ्यो । यद्यपि फाइदा भने कम हुन्थ्यो ।
अध्ययनमा देखियो कि जुन मानिस समझदार थिए, उनीहरुले आपसमा सहयोगको हात बढाए । यही कम समझदार व्यक्तिले आफूखुसीलाई प्राथमिकता दिए ।
यद्यपि अध्ययनले यो पनि देखायो कि जुन व्यक्ति समझदार छन्, उनीहरु सधैं आपसी सहयोगमा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरु यस्तो त्यतिबेला मात्र गर्दछन् जब उनीहरुलाई यसमा फाइदा स्पष्टसँग देखिन्छ ।
टिममा यदि समझदार र स्मार्ट मानिस छन् भने उनीहरुले राम्रो कामको गुण अन्यलाई पनि सिकाउँछन् । यसबाट पूरै टिमको काम राम्रो हुन्छ ।
अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ कि यदि कुनै टिममा केही स्मार्ट मानिसहरु छन् भने न त उ आफू स्वयम मात्र राम्रो काम गर्दछन, अरुलाई पनि राम्रो काम गर्नका लागि प्रेरित गर्दछन् । एन्डिस सोफियाँसो, युजेनियो पोर्टो र एल्डो रुस्तिचिनी, बीबीसी हिन्दी
Previous post: महले सबै भाँडा भरिए, मह बेच्न बजारको खोजी
Next post: बिहे गर्ने उमेरमा दुई सन्तानकी आमा ! सानैमा बिहे गरेकामा अहिले आएर पछुतो
फिफा वर्ष खेलाडीको शीर्ष तीनमा किन परेनन् मेस्सी